Ndụmọdụ na Omume Kachasị Mma maka Nnwale Ngwakọta Ahịa Salesforce | Martech Zone
Ndụmọdụ na Omume Kachasị Mma maka Nnwale Ngwakọta Ahịa Salesforce
Thursday, January 19, 2017 Fraịde, Jenụwarị 20, 2017 Amar Kukreja
Nnwale ndị ahịa ga-enyere gị aka igosipụta ahaziri gị Mgbakwunye ahịa yana arụmọrụ ya na ngwa oru ndi ozo. Ezi ule na-ekpuchi ihe niile Salesforce sitere na akaụntụ na-eduga, site na ohere na akụkọ, na site na mkpọsa na kọntaktị. Dị ka ọ dị na nyocha niile, enwere ụzọ dị mma (dị irè ma rụọ ọrụ nke ọma) nke na-eme nyocha Salesforce na ụzọ ọjọọ. Yabụ, kedu ihe Salesforce na-anwale ezi omume?
Jiri Ngwa nnwale ndị ziri ezi - Ule ahia na-eme na ihe nchọgharị ma obu gburugburu ebe obibi. Ma ihe nchọgharị kachasị ọhụrụ na eclipse nwere ngwaọrụ arụ ọrụ dị ukwuu ma ị nwere ike ijikọ ndị a na klaasị ule maka nsonaazụ enyemaka. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ karịa, a ga-eji Debugger Mmekọrịta Apex (ma ọ bụ naanị Apex) site na Force.com. Mara na ị nwekwara ike iji Salesforce Lightning Inspekto, ndọtị chrome, iji nwalee Salesforce Lightning. Apex na-bụ Force.com asụsụ nke usoro ihe omume nke nwere ezigbo myirịta na Java. Ọ bụ ihe gbadoro ụkwụ, enweghị uche, ụdị asụsụ mmemme na-agbaso usoro nkwado na akara ngosi ntụpọ. You nwere ike iji Apex rụọ ọrụ arụ ọrụ n'oge ọtụtụ usoro Force.com, gụnyere njikọ omenala na bọtịnụ, mmelite, nhichapụ, na ihe ndekọ ntinye ihe omume site na Visualforce peeji nke ndị na-ahụ maka ọdịnala ma ọ bụ usoro ihe omume.
Jiri Mgbakọ Kwesịrị Ekwesị Bụ Eziokwu - Kpọ aha usoro ule gị nke ọma tupu ịmalite ide ule dị ezigbo mkpa. Aha usoro ule kwesiri inwe uzo ato. Ndị a bụ nameOfMethod (aha nke usoro onye ị na-anwale dị ka ntinye / melite / hichapụ / undelete mgbe ị na-anwale ihe na-akpali akpali, ozi gbasara TestPath nke na-agbanwe agbanwe dị ka null kọntaktị ma ọ bụrụ na ị na-anwale na kọntaktị ahụ bụ ihe efu, ma dị irè mgbe ị na-anwale ụzọ dị mma / na-adịghị mma.
Gbaa mbọ hụ na mkpuchi 100% - Agbanyeghị na ntuziaka Salesforce bụ na ule ga-enwe mkpuchi nke 75% nke koodu gị (mwepu ule, kpọọ sistemụ na usoro nyocha) ma ị gaghị enwe ike itinye koodu Apex ma ọ bụ ngwugwu AppExchange ngwa, ị kwesịrị mara na nke a bụ naanị ọkọlọtọ na ebumnuche gị kwesịrị ịbụ mkpuchi 100%. Nwaleenụ ihe niile dị mma / na-adịghị mma na data dị na ọ bụghị ugbu a. Ndụmọdụ ndị ọzọ dị mkpa mgbe ọ bịara na mkpuchi koodu bụ:
Kwesịrị ịgbanye ule iji mee ka ọnụ ọgụgụ mkpuchi koodu nwee ume ebe ọ bụ na ọnụọgụ nọmba ndị a anaghị enweta ume mgbe koodu Apex na-emelite ruo mgbe a ga-eweghachi ule.
Ọ bụrụ na enwere mmelite na nzukọ ahụ kemgbe ule ikpeazụ na-agba ọsọ, enwere ihe egwu na nọmba mkpuchi koodu ahụ agaghị adị njọ. Regharịa ule maka atụmatụ ziri ezi.
Onu ogugu mkpuchi koodu etinyeghi mkpuchi koodu site na nnwale ngwugwu jikwaa, ma ewepu ya bu mgbe ule ndia na ebute ihe oku.
Ihe mkpuchi na-adabere na ọnụ ọgụgụ nke akara koodu. Ọ bụrụ na ịgbakwunye ma ọ bụ hichapụ ahịrị koodu, ị ga-emetụta pasent.
Ule Ule na klas na ndị nchịkwa - Na mmepe Salesforce, ọtụtụ ndị mmepe na-ekepụta klaasị dị iche na faịlụ njikwa maka ọrụ ọ bụla. Emere nke a iji mee ka nzuzo dịkwuo mfe, ka ọ dị mfe, na-ebugharị ma na-ebugharị. Ikwesiri ighota na obu ezie na odi mfe, ogagh adi nma karie. Ga-enweta mbugharị ma ọ bụrụ na koodu nnwale ahụ dị na klaasị mbụ na koodu njikwa ya ebe ọ bụ na ị gaghị eleghara klaasị ule ọ bụla mgbe ị na-esi na sandbox gaa na mmepụta.
Jiri System.assert () - Na Apex, Sistemụ() eji elele onodu. Nke a bụ ọrụ dị mkpa ebe ọ na - enye gị ohere ịchọpụta ma arụ ọrụ ọ bụla ejirila rụọ ọrụ dịka a tụrụ anya ya. Kwesịrị iji System.assertEquals () na System.assertNotEquals () n'etiti arụmọrụ dị oke mkpa anaghị enyere gị aka ịchọpụta ma etinyere koodu ahụ etu o kwesiri, mana iji hụkwa na edeghị data ọ bụla na-ezighi ezi ma ọ bụrụ na koodu ahụ ezighi ezi.
ComprehensiveTest - Ule kwesiri ikpuchi ihe niile. Ikwesiri ime ule nyocha, ule nnwale, ule nche, na nnwale ntinye.
Nnwale Nkeji - Kwesịrị ịnwale ule iji chọpụta na ndekọ ọ bụla na-eweta nsonaazụ ziri ezi na nke a tụrụ anya ya. Mgbe ị na-eji nnwale dị ukwuu nke na-ekpuchi koodu niile nwere ike ịdị ka ezigbo echiche, rịba ama na nsonaazụ ndị a ga - eme ga - esiri gị ike nghọta na ọdịda agaghị esi ike nghọta. Nnwale otu ga-ekpuchi obere mpaghara nke arụmọrụ a na-anwale.
Nwalee Nnukwu Ihe - Usoro nyocha dị mma (edemede, ma ọ bụ klas) nwere ike itinye aka maka ihe ndekọ narị (200 maka Apex). Ikwesiri iji nke a nwalee ma obughi nani ihe ndekọ ndi mmadu, kamakwa nnukwu okwu.
Ezigbo Ule - Nwalee iji hụ ma ọ bụrụ na omume a tụrụ anya na-eme site na nkwụsị niile a na-atụ anya ya. Nnwale ahụ kwesịrị ịchọpụta na onye ọrụ ahụ dejupụtara akwụkwọ ahụ n'ụzọ ziri ezi yana ọ gafere oke.
Nnwale na-adịghị mma - Nwaleenụ adịghị mma ikpe iji hụ njehie ozi na-emepụta n'ụzọ ziri ezi. Ihe Nlereanya nke ndị dị otú ahụ na-adịghị mma na-enweghị ike ezipụta na-adịghị mma ego na-enweghị ike itinye n'ọdịnihu ụbọchị. Nnwale na-adịghị mma dị mkpa n'ihi na njikwazi ihe mgbe ihe na-aga n'ebe ndịda nwere ike ịme ihe dị iche.
Na-akpaghị aka Ule - Na omenala, ule Salesforce bụ ntuziaka. Kwesịrị ịtụle akpaghị aka ule dị ka nke a na-enye ndị ọzọ uru. Ndị a gụnyere:
Nnwale aka na-eme ka ị nwee ike ịmehie ihe ebe ọ bụ na ụmụ mmadụ na-anwale abụghị ule. Ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ugboro ugboro mgbe ụmụ mmadụ na-emehie ihe n'ihi enweghị ike ọgwụgwụ, belata ịta ahụhụ na nkwụsi ike, na ọchịchọ nke ịkpụ akụkụ.
Nnwale akwụkwọ ntuziaka bụ ugboro ugboro, usoro na-agwụ ike. Ndị otu ule ahụ ka mma ịrụ ọrụ nke nyocha karịa.
Igbu ọ bụla Usoro Usoro Logic - Mgbe ị na-eji mgbagha ọnọdụ (mgbe ị tinyere ndị ọrụ ntanetị), ngalaba ọ bụla nke koodu mgbagha kwesịrị imezu.
Jiri Ntinye na-ezighi ezi ma bara uru maka oku maka usoro - Ekwesiri iji oku abanye na usoro iji ntinye na abaghị uru ma dị ire.
Ule zuru ezu - Gbaa mbọ hụ na ule ahụ mechara nke ọma - ha ekwesịghị iwepụ ọ gwụla belụsọ ma a tụrụ anya njehie ndị ahụ. Jikwaa ndị niile ejidere - ijide ha adịghị mma.
Jiri iwu site na isiokwu - Iji hụ na eweghachite ndekọ gị n'usoro ị tụrụ anya na ha, jiri iwu site na isiokwu.
Echekwala na A na-ahazi Ndenye Ndenye Nhazi - Zere ndudue a na-ahụkarị nke iwere NJ ndekọ ahaziri n'usoro n'usoro. NJ ndị a anaghị arịgo n'usoro, belụsọ ma ị tinyere ọtụtụ ihe ndekọ na otu arịrịọ ahụ.
Kpọọ Test.startTest () na Test.stopTest () - Mgbe ị na-agba ọsọ nyocha Apex, ị ga-enweta karịa mkpuchi koodu 75% nke bụ iwu na Salesforce. Kwesịrị ịkpọ StopTest tupu nkwupụta ekwenye ịmanye koodu asynchronous nke ka nwere ike ịgba ọsọ iji rụchaa. Gbaa ajụjụ ohuru maka nsonaazụ ikpeazụ ebe koodu ọzọ nwere ike ịgbanwe data. IjiTest.startTest () na Test.stopTest () na - eme ka o doo anya na ị ga - anwale ule ahụ n’ime oke gọvanọ ya. Zọ a, koodu ntọlite ​​ị na-eji agaghị egbochi gị ma nye gị nsogbu ụgha ma ọ bụ nkwenye gbara ọchịchị gọvanọ ókè. Test.stopTest () na-ahụkwa na ọkpụkpọ oku ga-emecha maka ule.
Gụ - Abilitygụ ihe dị ezigbo mkpa na ule otu. Aha nnwale ahụ kwesịrị ịgụnye ihe a kapịrị ọnụ a ga-eme na nsonaazụ a tụrụ anya ya. Zọ kwesịrị ịbụ nkọwa na mkpụmkpụ. Usoro a kwesiri idi ka enwere ike imeghari ya n’ule di iche-iche.
Mee nnwale nnwale nnwale buru ibu tupu mbido - Ebe ọ bụ na ule gị ga-agba ọsọ na sandbox na mmepụta dị iche iche, wuo usoro nnwale nnwale buru ibu tupu ị kpọọ StartTest iji hụ na ule ahụ nwere oke njedebe. Site na ndabara, Ahịa Github na-agba ọsọ ule dị iche na data mmepụta. Mgbe ịchọrọ data sistemụ dịka profaịlụ, jụọ ajụjụ iji nweta ihe ziri ezi maka gburugburu ebe ahụ.
Nweta data nnwale gị - A ghaghi itinye data nyocha ị na-eji na ule ahụ. Nwere ike iwepụta data a site na iji nyocha @testSetup na klas TestUtils ọ bụghị naanị na ị nwere data ziri ezi, kamakwa iji hụ na ule niile na-agba ọsọ na igbe nrụpụta na-enweghị ihe achọrọ maka data.
Zere enweghị ọrụ ị ga - Ọtụtụ ndị nnwale na-eji arụ ọrụ adịghị arụ ọrụ AKA. Ndị a bụ koodu na-abaghị uru nke na-eme ihe ọ bụla. Ebe ọ bụ na ha adịlarị na koodu gị, ha ga-agbakwunye na pasent mkpuchi gị.
Ule Ule Nlere - Mgbe ịmalitere ule site na njirimara ọrụ Salesforce ma ọ bụ Ihe Mmepụta, ule ndị ahụ ga-aga nhata. Nke a bụ ihe dị mkpa dị ka ọ na - agba ọsọ ọsọ oge. Ikwesiri ighota na nke a nwere ike ibute nsogbu esemokwu data ma ọ bụrụ na ị chee na nke a nwere ike ime, gbanyụọ mmegbu ahụ. Ihe na-ebute nsogbu esemokwu data na-edugakarị njehie UNABLE_TO_LOCK_ROW bụ:
Mgbe ule putara imelite otu ihe ndekọ n’otu oge. Imelite otu ihe ndekọ ahụ na - emekarị mgbe ule anaghị emepụta data nke aka ha.
Mgbe enwere nsogbu na ule ndị na-agba ọsọ na ha na-anwa ịmepụta ihe ndekọ ndị dabara adaba na mpaghara ụkpụrụ. A deadlock ga-eme mgbe 2 na-agba ọsọ ule kwụ n'ahịrị iji tụgharịa azụ data (a emee mgbe 2 ule ọsọ ọsọ ndia na nwere otu ihe pụrụ iche index ubi ụkpụrụ na dị iche iche iwu).
Iji gbanyụọ udomo ule egbu, gaa Mbido, tinye Apex Test, gaa Apex Test imepụta Nhọrọ dialog, họrọ gbanyụọ Ndekota Apex Testing, pịa OK.
Hụọ onye ọrụ maka ọrụ ahụ ebe ọ ga-enwe ahụmịhe na ọzụzụ dị mkpa iji mee nnwale dị mma, nke na-emekwa ka obi ruo gị ala. Inye pro na-enye gị ohere itinye uche na azụmahịa gị. Ọ na-azọpụta gị ego ebe ọ bụ na ịchọghị ụlọ otu ụlọ maka ọrụ ahụ.
Tags: apexakpaghị aka ahịa ulennukwu uleule zuru ezuike.comndị ahịadatfori ahịaahịa githubndị ahịa na-arụ ọrụ ule
Amar Kukreja nwere ọtụtụ afọ na ule Salesforce. Ọ na-eji Apex yana ule ndị ọzọ. Ọ na-enyekwa ọrụ ndị ọzọ metụtara Salesforce, gụnyere ntọala ntọala na njikwa Salesforce mbụ Ahịa Github.